जस्तै ठूलो अपराधीलाइ पनि मृत्युदण्ड चाहिँ नदिएकै राम्रो ।
के भन्ने म आफैँ अलमल मा परेँ । मध्यपुर्व को कानुन उनीहरु नै जानुन तर सजाय भने निकै डरलाग्दो छ ।
अब के भन्ने, फाँसी को विरोध विश्वभरि हुँदै आएको छ, सयौँ दबाबहरु सिर्जना गरिएकाछन्, तर उनीहरु डेग हल्लिएका छैनन् ।
भिडियो हेरिरहँदा, मन मा केही गर्हौँ कुरा ले थिचेको जस्तो अनुभव भयो । यस्तो भिडियो नराखेको भए हुनेथियो ।
हेत्तेरिका.... सारै डरलाग्दो पोष्ट बनाउनु भए छ ..!!! अपराध हेर्दा त ठुलै सजाय दिनै पर्ने हो मोराहरुलाई ... तर फाँसी अनि सार्बजानिक स्थल मै...यो चाहिं अति भो....
यहाँ मान्छे काट्न खसी बोका जसतो त सामन्यनै हो। यहाँको कानुनको बारेमा छलफल मात्र गरेको भेट्टायो भने पनि खत्तम तर सिकारु जी अहिले त यहाँ पनि अमेरिका छिरिसकेको छ तपाईले भित्तामा कालो पालिसले अरबिक अक्षरमा महिलाह्रुले आफ्नो हक मागेको देख्न पाईन्छ। त्यो कालो लेखाई लाई मुतवा ग्रुपले मेटाउदै गरेको पनि देख्न पाईन्छ। जति पनि सिकारु जीको लेखाई छ्न एकदम सही हो है। मैले पनि धेरै नै देखेको छु र सुनेको छु। यहाँको ठुलो मस्जीदमा कुवेत कतारबाट पनि ल्याईन्छन मार्नको लागी।
आकारजीलाइ जस्तै मलाइ पनि भिडियो हेरी सके पछी केहि गह्रौं कुराले थिचे जस्तै फील भयो, मृत्युदण्डको कानूनले २१ औं शताब्दिको मानव सभ्यतालाइ उपहास गरेको छ । यस्तो दृश्य पहिलो पटक देख्दैछु, सार्वजनिक स्थलमा साह्रै बिजोग गरि झुण्डयाउदा रहेछन नि । अपराध ठुलै हो, यद्यपि यस्तो मृत्युदण्डको सजायले मानव अधिकार उलंघन गर्छ, अपराधको प्रकृति हेरेर अत्यन्त कडा भन्दा कडा सजाय दिन सकिन्छ, यो त अति नै भयो ।
थरर मुटु काँप्यो । साथी कसरी राख्न सक्नु भयो यस्तो भिडियो ? सार्वजनिक स्थलमा यस्तो काम नगरे हुने तिनीहरुले । 'हे अल्ला ! यौटालाई न्याय दिने बहानामा यत्रो अत्याचार कसरी गर्न सक्छस् तँ ? ' कास खुदाले जवाफ दिन्थ्यो भने !
मानौ कुनै खेल भहिराखेको छ। यसो सोच्दा यहाँ कुनै खेलको जितको प्रतिक्षामा मनिसहरु बेचैनीका साथ रमाइरहे छन। यो मृत्यु त सजिलो पो हो त तर यो भिडियो हेर्दा मलाई हेक्का भाईरखेको छ कि यो भन्दा पनि दर्दनाक मृत्यु देखेका छौ हामीले। यदी यसरी मृत्युदण्ड दीएर अपराध कम हुने भए मध्यपुर्ब स्वोर्ग हुने थियो। हुन त यो यथार्थ हो र तपाईंको यो ब्लग पोस्ट राख्ने आटको म कदर गर्छु तर समर्थन चाँही गर्दिन।
गम्भिर अपराधीहरुलाई, यथेष्ट र पक्का प्रमाण भएको अवश्थामा, कडा सजाय दिनैपर्छ तर यो मृत्यदण्डचाहिँ गलत नै हो। कतिपय अवश्थामा निर्दोष मान्छेपनि परिबन्दले दोषी देखिएको हुन्छ र भविष्यमा उसको निर्दोषिता प्रमाणित हुनपनि सक्छ। हालसालै जापानमा एक ब्यक्ति सत्र वर्ष जेलमा बिताएपछि निर्दोष ठहरिए।
प्रकृतिले तेल दिएकाले धनी त भयो तर मध्य पूर्व अझै पनि मध्ययुगीन बर्बर युगमै छ। भिडियोमा देखिएको यो क्रूर दृश्यले पनि यहि प्रमाणित गर्छ।
maile mero sathi le bhaneko suneko thiye teha ta eakdamai darlagdo kaanun hunchha re. kasailai kunai praman dosh lagauna paidaina re yedi jhuto thahariyo bhane aafaile tesko sajaye bhognu parchha re. tara mitryudanda chai dina nahune ho
कतै किताबमा पढेको एउटा घटना याद आयो। ठ्याक्कै तिथि मिती त बिर्सें, तर बेलायतमा एकजना ओसवाल्ड भन्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दीईएको थियो । मृत्युदण्ड पश्चात सो व्यक्ति निर्दोष भएको प्रमाण अदालत समक्ष पुग्यो ।
अदालतले सो व्यक्तिको चिहान खनेर माफी समेत माग्यो र सो कंकाललाई अदालत परिसरमा ससम्मान राखीयो (भविष्यमा गतल निर्णय हुन नदिने संकेतको रुपमा)
यो एउटा घटना मात्रै हो, तर जसले जे भने पनि दिन नसकिने कुरा लिन पनि हुँदैंन।
अपराधिलाई कडा हैन 'गह्रौं' सजाय दिनु पर्छ । सजाय दिने हजार तरिका हुन सक्छन, तर मृत्युदण्ड भने मानव सभ्यताबाट बिदा हुनै पर्छ ।
अपराध गर्नु राम्रो त होईन, तर पनि मानव हो बाँच्ने अधिकार भने सबैलाई उत्तिकै छ।
साँचो त यो हो कि कतिपय अवस्थामा मृत्युदण्ड दिईसकेपछि मृत्युदण्ड पश्चात सो व्यक्ति निर्दोष भएको ठहरिन्छ के उसलाई फेरी नयाँ जीवन दिन सकिन्छ ? सकिदैन......त्यही भएर पनि, गर्ने ले गल्ति गरे पनि मृत्युदण्ड चाँहि नदिएकै राम्रो।बरु कडा भन्दा कडा सजाय दिन सकिन्छ।
सजाय त्यो हो, जुन पाउने मान्छेले भोगेर अनुभव गरेर बोध गरोस्- त्यस्तो कर्तुत गर्दा यस्तो नारकीय भुक्तमान झेल्नुपर्छ । तर मृत्युदण्ड नै दिएपछि भने त त्यसको केही सम्भावा रहँदैन । एउटा नागरिक तथा अनागरिक मान्छे सुध्रिने र लाइनमा लाग्ने कुरा कानुनकै किताबमा रहन्छ । फलत: सुसंस्कृत समाजको सपना जल्लादहरूले थाप्ने पासोमा कुचुर्किन्छ । दोषीलाई खुला ठाउँमा मृत्युदण्ड दिएर बाँकी दुनियाँलाई पनि तर्साउने काइदा-कानुन हुन सक्छ राज्यको, 'खबरदार त्यस्तो गर्‍यौ भने तिमीहरूको दशा पनि यस्तै हुन्छ ।' तर खोइ त फेरि पनि समाजमा, राज्यमा त त्यस्तो प्राणदण्डको व्यवस्था अख्तियार गरेर पनि त कुनै फरक नपर्ने रहेछ त ! फेरि अरू मृत्युदण्ड पाउनेहरूको सूची त बन्दै जाँदो रहेछ । अत: यस्तो कडा नीति आफैँमा राज्लाई वनको बाघले खाएको फलस्वरूप भएको हो, कि त मारिदियो टन्टै साफ भन्ने सजिलो खेती चलाएको हुनुपर्छ । उठाउनुभएको कुरा सान्दर्भिक भए पनि सूर्य जीले यस्तो भिडियो भने नराखेकै भए हुने ।
मित्रहरुको प्रतिकृयालाई मध्यनगर राख्दै-
हुन त मैले पनि यो भिडियोलाई नराखौ भन्ने मनसाय बनाएको थिए । करिब ३ महिना अगाडि नै मैले यसलाई हेर्ने अवसर पाएको थिए । नेपालि मन हो, यो भिडियो पहिलो पटक देख्दा मेरो पनि मुटु भरिएर आएको थियो । अझै आफु पनि यै देशमा रोजगारीको शरण लिएर बाँच्नु पर्दा अति नै कहालि लाग्दो अवस्थामा आइपुगेको सोच्दथे तर यहाँका आन्तरिक कुराहरुको साथै बाहय परिबेशलाई नियाल्दा यिनिहरुको लागि सामान्य रहेछ । कानुनको हिसाबले कडा कहलिएको ठाँउ भनेर सुने तापनि कतिपयले बिश्वास पनि गर्न सक्नुभएको थिएन होला यो बर्बर सजाएको परिपटि । आफ्नै आँखा नजिकै भएको यो मन पोल्ने कहानि लाई मनमा राख्नै सकिन ताकी सुनेको कुरालाई यथार्तमा देखाउने दुस्साहस मात्र गरेको हु ।
कानुनी हिसाब मै दिइएका यस्ता डरलाग्दा र बिभस्त घटना हरुका भिडियो र रेकर्ड हरु म संग अरु पनि थुप्रै छन तर अरुको तुलनामा यो अलि सहज र हेर्न सकिने खालको भएको हुनाले राखेको हु। साथिहरुमा पर्न गएको असुबिधा र असहज मनस्थितिको लागी क्षमा चाहन्छु । मलाई पनि यो घटना उसतै लाग्छ जब इराकमा १२ नेपालीहरुले आतंककारिको हातबाट निर्मम ह्त्या भयो फरक यति हो यहाँ कानुनले सजाय दियो भने वहा अपहरण पछि मारियो आतंककारिको हातबाट ।
२१ शताब्दिको यो युगमा पनि यस्ता कानुन र बिधानहरु जिबितै छन भन्ने जानकारि मात्र पस्कन खोजेको हु । पुन साथिहरुमा पर्न गएको मनोबैज्ञानिक असरको लागी क्षमा चाहन्छु ।
मानब सभ्यताको बिकाससगै समाजमा देखा पर्ने बिभिन्न प्रकृतिका अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि बिभिन्न मानबिय कानुनहरु राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा निर्माण हुँदै र त्यसमा परिमार्जन तथा परिस्क्रीत हुँदै गएपनी मध्यपुर्बका केही देशमा अपराध गरे बापत दीईने यस किसिमको मृत्‍युदण्डलाई अबश्य पनि कुनै पनि मानब समाजले सही भनेर भन्न सक्दैन। २१ औं शताब्दिको सेरोफेरोमा पनि मृत्‍युदण्डलाई अगाँलेर कानुनी राज्यको मर्यादा निर्बाहा गरेको महसुस गरिन्छ भने त्यो भन्दा हाँसोको बिषय अर्को के हुन सक्छ? अपराध नियन्त्रण हुनुपर्छ र अपराधीलाई बढी भन्दा बढी कष्टकर सजाय दिनुपर्छ र त्यो मानवीय न्यायले मात्रै दिलाउन सक्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । हो कसैले ठुलो अपराध गर्‍यो र उसलाई मृत्‍युदण्द दिईयो तर मृत्‍युदण्द झन ठुलो अपराध भएन र ? बाँच्न पाउने अधिकारको हनन गर्ने कानुन पनि के कानुन?
डरलाग्डो सजाए । मुटु नै चिरियो हेर्दा ।
मैले यस्तै घटना १ वर्ष पहिले हेर्या थिए एउटा भिडियो मा ..." एक महिला र एक पुरुष लाइ फासी दियिएको थियो | "
यसले त्यसैलाई ताजकी गराइदियो सिकारु जी !
यस्तो घटनाले मानवीय संवेदना भएको जो कोही लाइ पानी आघात पार्न सक्छ ......... खूब डर लाग्यो | अत्यन्त भर्सनायोग्य रहेको छ |
ओहो ,मेरो त मुटु नै चिसो भएर पो आयो,त्यो भिडियो पुरा हेर्न नै सकिएन पढेरै कुरो बुझे।तर अपराधी यसरी निर्मुल होला र????
je bhayo ramro bhayo ra nepal ma pani jaba samma balatkari lai mrityu danda hudaina taba samma nepali mahila haru pani surakchhit huna sakdaina.